Vadiwa shamwari, tichidzidza chiGerman, muchidzidzo chino, isu tichataura nezve michero muchiGerman. Tichadzidza iwo ma singulars emichero yeGerman nezvakawanda zvezvibereko zveGerman. Chokutanga pane zvose, tichadzidza chiGerman chezvibereko zvakajairika.
Ndichiri kudzidza Zvibereko zveGerman, isu tichadzidza pamwechete nezvayo zvinyorwa. Uye zvakare, isu takagadzirira iwe zvakanaka kwazvo zvinoonekwa nezve michero muchiGerman. Iye wechiGerman wemaropafadzo aya akanaka uye michero yakajeka iyo Ishe wedu yavakatipa. nezvose zviri zviviri uye zvakawanda tichadzidza.
Gare gare, mushure mekudzidza nezve michero sezvatinopurukira pasi kuzasi kweiyo peji, tichaita mitsara yechiGerman nezve michero iyi. Isu tichapa ruzivo nezve michero muchiGerman. Semuyenzaniso "Ndimu yero, ine zvakawanda zvevhitamini C, yakatenderera uye ine hutanoTichaita mitsara inodzidzisa yeGerman nezve michero yakaita se ”. Ipapo "ndinoda apple","Handidi ndimuTichapa mienzaniso yemitsara inotsanangura michero yatinoda uye yatisingade.
Musoro wemichero muchiGerman unowanzo dzidziswa mugiredhi re9 kana regumi. Iyi kosi ichave yevadzidzi vanodzidza chiGerman vari vega, 10th giredhi vadzidzi uye yegumi giredhi vadzidzi.
Zvino michero yeGerman nezvinhu zvavo zvese pamwe nehumwe uye zvakawanda Ngatidzidzei michero yeGerman imwe neimwe.
Zvimwe uye Zvizhinji Zvibereko zveGerman Illustrated
DER APFEL - APPLE
KUFA BIRNE - PEAR
KUFA RANGI - ORANGE
KUFA MANDARARA - MANDARINI
KUFA GRAPEFRUIT - GRAPEFRUIT
FA ZVINOKOSHA - AVA
KUFA BANANE - BANANA
KUFA TRAUBE - GRAPE
DER PFIRSICH - PEACH
KUFA ZITRONE - REMONI
KUFA KIWI - KIVI
KUFA KIRSCHE - CHERRY
VANOFA APRIKOSE - APRICOT
KUFA MELONE - MELON
KUFA WASSERMELONE - MVURA
KUFA FEIGE - FIG
KUFA PFLAUME - PLUM
KUFA ERDBEERE - STRAWBERRY
KUFA BROMBEERE - BLACKBERRY
FA KOKOSNUSS - KANGONI
KUFA ANANAS - ANANAS
Zvibereko zveGerman muTafura
Shamwari dzinodikanwa, isu tagadzirira tafura diki pazasi kuitira kuti iwe ugone kuona ese maGerman neTurkey emichero pamwechete. Iwe unogona kuona michero yeGerman pamwe chete mune irongwa pazasi. Sezvo isu takapa michero yeGerman nezvakawanda mumifananidzo iri pamusoro, hatina kuzonyorazve huwandu hwezvibereko zveGerman patafura pazasi.
der Apfel maapuro
kufa Birne Pears
kufa Orange orenji
kufa Grapefruit bhuratifuru
der Pfirsach mapichisi
kufa Aprikose apricots
kufa Kirsche Cherry
kufa Granatapfel mutamba
kufa Quitte Quince
kufa Pflaume Erik
die Erdbeere mastrawberry
die Wassermelone visi
kufa melone nwiwa
kufa Traube girepisi
kufa Feige maonde
kufa Kiwi kiwi
kufa Chinanazi chihenge
kufa Banane mabhanana
kufa Zitrone Limon
kufa zvisirizvo medlar
kufa Himbeere razibheri
die Kokosnuss Koconut
ZVINHU ZVOKUZIVA PAMUSORO PEMAJEREMANI MATANHWA
Vadiwa shamwari, pamusoro, isu takapa michero yeGerman zvese nemaziso uye mune tafura fomu. Ehe, aya mazwi anoda kuverengerwa, semazwi ese echiGerman, pamwechete nezvinyorwa zvavo uye zvakawanda zvavo. Pamusoro pezvo, takazvitaura muzvidzidzo zvedu zvekare, asi ngatipei rumwe ruzivo nekuyeuchidza zvakare kuti panogona kunge paine shamwari dzisingaverenge. Pamwe yakabata pfungwa dzako uchiongorora mifananidzo iri pamusoro.
Chinyorwa chemazita mazhinji emichero yeGerman "kufa". Sezvinoonekwa mutafura iri pamusoro, chete "der Apfel", ndiko kuti, chinyorwa chemuchero wemapuro "der". Chinyorwa che "kufa" ndicho chinyorwa chemimwe michero.
Iko hakuna capital ini uye mavara madiki I mune echiGerman alfabheti. Mune mamwe mazwi, tsamba i haina yepamusoro uye yakaderera tsamba ini tsamba. Naizvozvo, seshoko rega rega, iwe unofanirwa kuve nehanya nezve kupereterwa kwemichero muchiGerman.
Takazvitaura muzvidzidzo zvedu zvekare. MuGerman, kunyangwe zita riri zita chairo kana zita rejenasi, tsamba yekutanga inofanirwa kuve yakadomwa. Sezvinoonekwa mune zviri pamusoro zvinoonekwa uye tafura, mavambo emazita echiGerman emichero anogara aine capitalized. Mutemo uyu unoshanda chete kumazita, asi kwete kwezvipikisheni, zvirevo, zvirevo, zviito.
SAMPLE SENTENCES PAMUSORO PEMAJEREMANI MATANHWA
Iye zvino ngatigadzirei mitsara mitsara nezve michero muchiGerman. Isu tichatsanangura yedu yemuenzaniso mitsara nezve michero muchiGerman nerutsigiro rwekuona Mushure memufananidzo wega wega, isu tinoshandura mitsara yedu muchiGerman.
Makodhi Nezve Apple muchiGerman
Iye zvino ngationgororei mitsara iri mumufananidzo uri pamusoro. Sezvauri kuona, muchero uri pamusoro iapuro. Zvino ngationgororei zvirevo zveGerman nezve apple rimwe nerimwe.
Iyi ndiyo Ein Obst : Ichi chibereko
Mein Lieblingsobst ndiApfel : Muchero wangu wandinoda iapuro
Es ist rot, come b oder grün : Iyo yakatsvuka, yero kana girini
Es is oval : Iri denderedzwa
Es is gesund : Agwinya
Es hat Vitamin B uye Vitamin C : Iine vhitamini OB uye vhitamini C (ine, zvinoreva kuti ine)
Mitsara NezveGerman Mandarin
Iye zvino ngationgororei mitsara iri mumufananidzo uri pamusoro. Sezvauri kuona, michero iri pamusoro ndeye tangerine. Zvino ngationgororei zvirevo zveGerman nezve tangerines imwe neimwe.
Zvinodiwa : Ichi chibereko
Es ist orenji uye denderedzwa : Iranjisi uye yakatenderera
Hut hat sehr viel Vitamin C : Iine vhitamini C yakawanda (ine, inayo)
Es ist sehr sehr sept : Ane hutano hwakanaka
Ruzivo nezveGerman Grape
Iye zvino ngationgororei mitsara iri mumufananidzo uri pamusoro. Sezvauri kuona, muchero uri pamusoro ndewemuzambiringa. Iye zvino ngationgororei mitsara yechiGerman nezve mazambiringa rimwe nerimwe.
Es kann grün, huya b oder violett sein : Inogona kuve yakasvibira, yero kana yepepuru
Es is klein : Iye mudiki
Es hat Kalium uye Vitamin C : Iine calcium uye vhitamini C (ine, inayo)
Mitongo nezve Watermelon muchiGerman
Iye zvino ngationgororei mitsara iri mumufananidzo uri pamusoro. Sezvauri kuona, muchero uri pamusoro ivhu. Zvino ngationgororei zvirevo zveGerman nezvemavise rimwe nerimwe.
Das ist sehr groß : Izvi zvakakura
Es ist ein Obst : Chibereko
Es ist gehena grün uye dunkel grün : Iyo yakajeka girini uye yakasviba girini
Es hat Vitamin A, Vitamin C uye sehr Wasser : Ine vhitamini OA, vhitamini C uye mvura yakawanda (ndizvozvo)
Mitsara NezveRimu muchiGerman
Iye zvino ngationgororei mitsara iri mumufananidzo uri pamusoro. Sezvauri kuona, chibereko chiri pamusoro ndimu. Zvino ngationgororei mitsara yechiGerman nezve mandimu imwe neimwe.
Das ist ein Obst: Ichi chibereko
Es ist gelb und sehr sauer: Yero uye yakasviba kwazvo
Es ist oval und sehr gesund: Iyo yakatenderera (oval) uye ine hutano hwakanyanya
Es hat sehr Vitamin C: Iine (ine, ine) yakawanda (yakawandisa) vhitamini C
SAMPLE SENTENCES NEZVINOKOSHA MUGERMAN michero uye MÖGEN ACT
Iye zvino ngatinyororei zvirevo zvemuenzaniso tichishandisa zviito. Semuenzaniso, ngatiitei mifanidzo mitsara senge ini ndinoda wakadai uye wakadai muchero, ini handidye wakadai uye wakadai muchero. Tarisa uone iyo pazasi mifananidzo uye yavo tsananguro. Isu takashandisa zviito mögen uye essen mumitsara yedu.
MÖGEN VERBAL SHOOTING
Er / Sie / on mag
ESSEN CHOKWADI PURE
Er / Sie / on anodya
Sie / sie udye
Isu takapa zviito zvekubatanidza pamusoro apa. Isu takatopa ruzivo rwakadzama nezve zviito zveGerman uye chiito conjugation muzvidzidzo zvedu zvakapfuura. Iye zvino ngatinyororei zvirevo zvemuenzaniso nezve michero muchiGerman tichishandisa idzi nzou.
Wir mögen Obst: Tinoda michero
Ich esse gerne Erdbeeren: Ndinofarira kudya mastrawberry
Ich esse gerne Trauben: Ndinofarira kudya mazambiringa
Ich mag Obst nicht: Handidi michero
Shamwari dzinodiwa, Muchidzidzo chino pamichero yechiGerman;
Takadzidza michero yeGerman pamwe nezvinyorwa
Takadzidza michero yeGerman pamwe neyakawanda uye yakawanda
Takadzidza kunyora mitsara inogona kupa ruzivo nezve michero muchiGerman.
Isu takadzidza kunyora mimwe mienzaniso mitsara nezve michero tichishandisa zviito zvakare.
Vadiwa shamwari, tinofunga muchada kubata nemusoro chidzidzo chatakadzidzisa chidzidzo ichi. German Zvibereko (das Obst) ndiyo yaive nyaya. Tinogona kutaura kuti kune akawanda mazita emichero. Mune zvinyorwa uye mifananidzo yatakugadzirira iwe, isu takasanganisira izvo zveGerman-Turkish zvakaenzana zvemichero inozivikanwa kwazvo iyo yatinofunga iwe unofanirwa kudzidza. Tinokuratidza Chibereko cheGerman Mushure mekudzidza mazita avo, unogona kuwana rumwe ruzivo nekushandisa duramazwi kana uchida.
Sezvatakataura mumusoro wenyaya Mazita echiGerman emichero Iwe unozofanirwa kubata nemusoro uchiri kudzidza. Iyo yakapusa uye inoshanda kwazvo nzira yekuisa mumusoro hapana mubvunzo nzira yekuteedzera mundangariro nekuenzanisira. Iwe unogona kuita iyi nzira nekurega nguva yako pamba uye nekudaro kuita kuti kubatanidzwa kwezvawakadzidza.
Tinokurudzira kuti iwe uedze kubata nemusoro mazita echiGerman emichero nekugadzirira makadhi madiki ane mufananidzo wemuchero uye kuanyora pazasi. Panguva ino, iwe unogona kushandisa yeGerman mazita emichero mazita atakugadzirira iwe. Kuti usakanganwe, tinofanirwa kukuyeuchidza kuti ubate nemusoro mazita emichero pamwe nezvinyorwa zvavo kakawanda. Tinovimba unozviita tsika uye ita izwi rako rese kurangarira nenzira iyi.
Ndo zvese zvatichakupa nezve michero muchiGerman. Iwe unogona ikozvino tarisa zvimwe zvedu zvidzidzo. Tinokuda iwe rombo rakanaka.
10 kirasi german zvibereko11 kirasi german zvibereko9 kirasi german zviberekoGerman chibereko mazitaGerman chibereko mazitaGerman chibereko yemiriwo mazitaGerman fruit fruitchiGerman chibereko nemiriwoZvibereko zveGerman uye zvakawandamitsara inotsanangura michero muchiGermanusataure nezve michero yegermanykukurudzira michero yegermanyZvibereko zveGerman zvemicheroyakawanda yemichero yechiGermanChiGerman Mögen mitsaraich mag mitsaramichero mazita germanmichero germanmajirusi ezvibereko
Zvibereko zveGerman nemiriwo
Chii chinonzi chinyorwa?
German Hofisi Fenicha
Mazwi Anoenderana Nechikoro cheGerman (Dzidzo…
9th Grade German 1 Unit Vocabulary